अनशनरत थापाको स्वास्थ्यमा समस्याः केसी अस्पताल भर्ना
भगीरथ भण्डारी इलाम । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई हुबुहु संसदबाट पारित हुनुपर्ने माग राख्दै अनशनरत विजय थापाको स्वास्थ्य प्रतिकुल बन्दै गएको छ । इलामको
काठमाडौं । कोकमा रक्सी मिसाएर मताएर दुई युवकले झापा भद्रपुरको एक किशोरीलाई बलात्कार गरेका छन् । घटनामा संलग्नताको अभियोगमा एक जनालाई जिल्ला प्रहरीले भद्रपुर–२ बाट पक्राउ गरेको डिएसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो
न्यायालयप्रति विश्वास बढ्नेछः काननुमन्त्री ढकाल
विराटनगर । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायालयमा देखापरेका विकृति हटाउन सरकार योजनाका साथ अघि बढेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध
विराटनगर । नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभएको छ । विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र संविधानसभाबाट ल्याइएको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा
विनु तिम्सिना मोरङ । स्थानीय चिसाङ खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने ट्याक्टर र ट्रिपरबाट अवैध चन्दा असुलीमा संलग्न भएको आरोपमा कानेपोखरी ५ का वडाध्यक्ष चरणसिंह गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी
डा. केसीका विरुद्धमा आमरण अनसन
भगीरथ भण्डारी इलाम । डाक्टर गोविन्द केसीले १६ औं सत्याग्रह इलामबाट शुरु गरेको तीन दिनपछि केसीको सत्याग्रह विरुद्ध विजय थापाले आमरण अनसन शुरु गर्नुभएको छ । समितिले पारित गरेको चिकित्सा
मोबाइलको ब्याट्री पड्किएर अमितको मृत्यु
विनु तिम्सिना मोरङ । विराटनगर महानगरपालिका–१५ बस्ने सुभाष मण्डलको ११ वर्षीय छोरा अमित मण्डलको मोवाइलको ब्याट्री पड्कँदा मृत्यु भएको छ । सोही स्थानका राजेश मण्डलको ६ वर्षीया छोरी राधिका मण्डल
ताप्लेजुङ । मिक्वाखोला गाउँपालिका –४ का प्रतापसिंह साँवाको हत्या आरोपमा दुईजनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । सोही ठाउँका १९ वर्षीय रोशन लिम्बू र १८ वर्षीय विशम भनिने विनम
सांसद उषाकला यसरी बसिन् आमाको क्रिया !
काठमाडौं। प्रदेश नम्बर एककी प्रदेश सांसद उषाकला राई आफ्नी दिवंगत आमाको क्रियापुत्री बस्नुभएको छ । उपचारकै क्रममा बुधवार ग्राण्डी अस्पतालमा बित्नुभएकी ७५ वर्षीया आमा लक्ष्मी राईकाे क्रिया बस्नुभएकाे हाे ।
ग्यास सिलिण्डर पड्किएर आगलागी
झापा । दमक– २ स्थित डाकिनीमा रहेको हरिप्रसाद निरौलाको घरमा बिहीबार बिहान आगलागी भएको छ । बिहान पौने छ बजे भएको आगलागीबाट घर सहितघरमा रहेका सबै सामान जलेर नष्ट भएका